China Anyịnya ihe batching osisi Manufacture na Factory | Mkpọchi
Anyị na-enyere ụwa aka ito kemgbe 2015
Mobile Concrete batching osisi
Anyịnya Concrete batch Plant
SICOMA Concrete igwekota
BHS Concrete igwekota
SICOMA Sapre Akụkụ
BHS mapụtara Parts
Senti ịghasa ebu
Rewghasa ebu mapụtara Parts
Ciment Silo mapụtara Parts
Eriri ebu mapụtara Parts
Atchgba Ngwunye Ihe Osisi
Usoro Ngwakọta Ngwakọta
Batch igwekota mapụtara Parts
Automatic Concrete batch osisi
Kọmpat Concrete batching Plant
Concrete batch na inggwakọta Plant
Concrete batching osisi ebu
Akọrọ Mix Concrete batching Plant
Mini Concrete batch osisi
Njikere Mix Concrete batching Plant
The HZS usoro ihe inggwakọta osisi bụ a bụ ike n'ichepụta na elu-arụmọrụ akụrụngwa na ike na-emepụta iche iche iche iche nke ihe. Na elu mmepụta arụmọrụ, ọ na-eji na nnukwu na-ajụ-sized ụlọ ewu, okporo ụzọ axial engineering na mkpa ụlọ mmepụta ihe maka amị ihe ngwaahịa. Ọ bụ ezigbo akụrụngwa maka ịmepụta ihe azụmahịa. Ya inggwakọta usoro adopts a ejima aro manye igwekota, nke nwere ezi inggwakọta Ime, obere inggwakọta oge, ogologo ọrụ ndụ nke yi akụkụ, na-adaba adaba ọrụ na mmezi. Ọ na - eweputa teknụzụ njikwa ọhụụ dịka sistemụ kọmputa, njikwa kọmputa na ngosi dijitalụ. A na-eji ngwaọrụ nchekwa elektrọnị arụ ọrụ na ọrụ nkwụghachi ụgwọ akpaka, yana oke nha. Aja na gravel nri usoro adopts a nnukwu obosara herringbone eriri maka udia na-onwem na n'akụkụ ụzọ. Ọ bụ nhọrọ dị mma maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngalaba ihe owuwu iji mepụta ihe kacha mma.
DKTEC nwere ike ịchọta mkpa ndị ahịa n'ụzọ dị mfe site na ya na-agwakọta osisi ndị na-agwakọta nke ikike na nkọwa dị iche iche.
Ọ nwere ọtụtụ ofu ihe batching, na ikike imepụta igwekota sitere na 60m³ / h ruo 180m³ / h. Anyị nwekwara ike ịhazi azịza dịka mkpa ndị ahịa si dị, email anyị: sales@dongkunchina.com
Tụkwasị na nke ahụ, n'otu ụlọ a na-agwakọta ihe ọkụkọ na ndị na-agwakọta abụọ, ikike mmepụta nwere ike iru 240 cubic mita / awa na 360 cubic mita / awa.
Ihe Nkeji HZS25
Theory arụpụtaghị m³ / h 25
Mmepụta nke igwekota m³ 0,5
Edingdị nri Na-eweli hopper
Cherdị batrị m³ NKP. 800
Ogbe (olu kwa biini) m³ 3
Ogbe (bins ego) pc 4
Ike igwekota kw kw Ogbe 18.5
Ike na-ebuli kw kw 5.5
Ihapu elu m 1.5 / 2.7 / 3.8
& Izi ezi
Nchịkọta n'arọ 1500 ± 2%
Ihe ntụ ntụ n'arọ 300 ± 1%
Mmiri mgbapụta n'arọ ± 1%
Mmako mgbapụta n'arọ ± 1%
Ihe Nkeji HZS35
Theory arụpụtaghị m³ / h 35
Ike igwekota kw kw 30
Ike na-ebuli kw kw 7.5
Nchịkọta n'arọ 2000 ± 2%
Ihe ntụ ntụ n'arọ 500 ± 1%
Ihe Nkeji HZS60
Mmepụta nke igwekota
Ogbe (olu kwa biini)
Ogbe (bins ego)
Ngwa mmasị eriri ebu ike
Max na-atụle Eziokwu Nchịkọta
Ihe ntụ ntụ
Ihe Nkeji HZS90
Max na-atụle Eziokwu
Ihe Nkeji HZS120
Ihe Nkeji HZS180
HZS usoro ihe inggwakọta osisi mejupụtara inggwakọta usoro, Ihe batching usoro, Itule usoro na Ọdụdọ akara usoro. O kwesịrị ekwesị ka nnukwu na obere ewu saịtị, precast ihe ngwaahịa osisi na mmepụta osisi.
Ejima aro ihe igwekota nwere ike inggwakọta ikike, edo inggwakọta àgwà na elu na arụpụtaghị. Ọ nwere ezi mixgwakọta mmetụta nke ihe na akọrọ ekweghị ekwe, ọkara akọrọ ekweghị ekwe, plasticity na iche iche n'ike-n'ike. A na-ebubata sistemụ lubrication na sistemụ okporo osisi isi site na ngwugwu mbụ, usoro mmeghe nke hydraulic nwere ike idozi oghere nke ụzọ nchụpụ dị ka achọrọ. Thegwakọta osisi nke isi igwe na-agwakọta na-agbaso teknụzụ mgbochi adhesion iji gbochie agglomeration nke ciment na shaft. The aro ọgwụgwụ akara adopts a pụrụ iche multiple akara Ọdịdị n'ụzọ dị irè iji gbochie mortar leakage na hụ na-aga n'ihu na ogologo oge ọrụ nke dum inggwakọta usoro. Usoro nhicha ahụ na-ejide mgbapụta mmiri dị elu na-arụ ọrụ nchịkwa na njikwa ntuziaka, Oghere ntanetụ mmiri dị kpọmkwem n'elu agwakọta agwakọta, nke na-eme ka arụmọrụ na-agwakọta, na-eme ka alụlụ mmiri na-ebelata, na-ebelata mmetọ ájá ma na-ewepụ arụ ọrụ ciment n'ụzọ dị irè. O kwesịrị ekwesị ka nnukwu-ọnụ ọgụgụ ewu, azụmahịa ihe ụlọ ọrụ, wdg
Ejima-aro ihe igwekota
Mkpokọta Batching System
Họrọ igwe oku; a na-ahazi usoro nri n'ụdị "ngwaahịa" ma na-enyefe ya site na onye na-ebu belt; ọ na-agbaso ụzọ abụọ nke ihe ọ bụla na-eri ihe na ihe na-agakọ; elekere eletrik, njikwa PLC, ihe ngosi dijitalụ; t nwere ezi-erikpu, elu batching nkenke, ngwa ngwa ọsọ, ike akara ọrụ, mfe ọrụ, wdg
Tinye ihe ndị edere, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya; nchịkwa dịpụrụ adịpụ, ikike ndị ọrụ nwere ike ekenye ya, nweta usoro nhazi oru ngo; ọgụgụ isi akara, akpaka akara, ntuziaka akara na otu; na ruru ruru, akpaka dobe akwụ ụgwọ, n'elu-ọnụ ọgụgụ, n'okpuru-ọnụ ọgụgụ mkpu mgbazi; Ngwaọrụ nwere ọrụ dịka nlekota ọrụ, nchekwa igwe ojii, mbipụta, wdg.
Usoro Ibu Ibu
A na-eji ntụ ọka elektrọnik, mmiri, na ihe ndị e ji atụ̀ ihe n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀; nkuku batching di elu na njiri ziri ezi; ciment, ada uyi, na mmiri e ji atụ hopper na-akwado na etiti site atọ tent nke ihe mmetụta, nke nwere a ike Ọdịdị na elu pụrụ ịdabere; ihe mmako metering hopper tụrụ site otu na-eweli isi ihe mmetụta
A na-eji osisi agwakọta nke ọ bụla maka ndị ahịa!
Pricegwọ nke osisi batching ọ bụla dịgasị iche site na nhazi dị iche iche!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe ọmụma ọnụahịa zuru oke nke obere ebe a na-agwakọta, ị nwere ike ịkpọ ekwentị hotline anyị ozugbo: 0086-571-88128581
Dabere na nhazi ị chọrọ, anyị ga-enye nkọwa ziri ezi ma hapụ gị ịnweta ozi ịchọrọ na obere oge!
Mmezi nke ihe igwekota
1.Gbaa mbọ hụ na igwe na gburugburu ya dị ọcha.
2.Clear ihe a chịkọtara na hopper n'oge iji mee ka ihe mmetụta ahụ laghachi na efu.
3.Choputa ma mmanu mmanu di na ebe ozo n'ile ya zuru oke, na mmanu mmanu n'ile ikuku kwesiri inwe mmanu zuru oke.
4.Choputa ma moto na akụrụngwa eletriki na-ekpo oke ọkụ ma ọ bụ ụda na-adịghị mma, ma akara ngosi ahụ dị mma, yana ma usoro mgbaàmà ahụ adịla.
5.Chelee ma dozie cylinder ahụ, valvụ urukurubụba na valvụ solenoid ugboro ugboro iji mee ka oghere na mmechi ahụ mezuo ihe a chọrọ.
6.Cholee usoro nke ọ bụla mgbe niile, ma mesoo ya n'oge ma ọ bụrụ na ọnya ure, ikuku gas, nkwụsị mmanụ na ọkụ eletrik.
7.The igwekota na orùrù hopper ga-kpochara ọ bụla awa anọ iji gbochie ihe mmapụta ihe si ume na-egbochi nkịtị ọrụ.
8.Ọ bụla nnofega kwesịrị ịhapụ mmiri dị n'ime nke ikuku Compressor, ebe nchekwa ikuku na nzacha, ma kpochapụ ihe ndị na-eme n'oge arụmọrụ.
9.The urukurubụba valvụ, igwekota, solenoid valvụ, ikuku nyo na mmanụ alụlụ ngwaọrụ na-nọgidere na-enwe dị na mkpa ntụziaka.
The ụlọ ọrụ tumadi emekọ ihe batching osisi akụrụngwa na akụkụ ahụ mapụtara ọrụ, gụnyere ciment silo, ciment ịghasa ebu, ihe igwekota, belt ebu na nchịkọta agwakọta usoro, na-enye onye-nkwụsị ọrụ maka ndị ahịa ọrụ.
Ihe di iche iche na gburugburu ebe obibi ...
Engineering nnukwu-ọnụ ọgụgụ inggwakọta osisi inte ...
Gịnị bụ a Mobile Concrete Plant?
Global ihe batching osisi ahịa kutu ...
CONCRETE BATCHING osisi ahịa INCREAS ...
Automaticaggregate Batching Fatịlaịza igwekota, Automatic nchịkọta Batching Machine, Mkpokọta Batching System, Mkpokọta batching Dosing System, Concrete igwekota mapụtara Parts, Automatic nchịkọta Batching System,